Indawo yeeNdwendwe eRanch ene-King Bed Jetted Tub kunye nokuJonga
Indawo yeendwendwe zestudiyo zabucala ezineembono ezintle ngaphezulu kwendawo yethu yesitora enebhedi yenkosi kunye negumbi lokuhlambela labucala elinebhafu etshixwayo kunye neshawari
kunye nekhitshi elipheleleyo. Indawo entle yokuphumla kwaye uphumle. Sikwifama yeehektare ezi-6 kwi-Evergreen Valley enoxolo ye-Olympia kwaye malunga nemizuzu eyi-15-20 ukusuka kuhola wendlela. Indawo yethu yelizwe izolile kwaye iyahlaziya. Sinamahashe, iinkukhu, izinja kunye neekati (akukho zilwanyana zangaphakathi) ke yiza ukonwabele ukubonwa kunye nezandi zefama yethu.
Indawo yakho yeendwendwe estudio ibekwe ngaphezulu kwendawo yethu yesitora enebhedi yenkosi kunye negumbi lokuhlambela labucala elinebhafu yejethi. Akusayi kubakho zilwanyana kwindawo engaphantsi kwe-suite ngexesha lokuhlala kwakho kodwa uya kukwazi ukuzijonga kwifestile yakho. Indlu yethu engundoqo yakhiwa ekuqaleni kweminyaka yoo-1900 yaza yashukunyiswa yaze yalungiswa ngokutsha ngo-1990. Ukusukela ngoko uhlaziyo oluninzi lwendlu luye lwagcina umtsalane woqobo kunye nezinto eziluncedo zale mihla. Sihlale apha ukusukela ngo-1990 kwaye sikhulise abantwana bethu aba-5 apha kunye nokuvula ikhaya lethu kubafundi bamanye amazwe kunye nosapho kunye nabahlobo abafuna indawo yokuhlala.